स्वास्थ्य Archives - Prateek Nepal
काठमाडौं । कोरोनाको नयाँ प्रजातिको जो’खिम कम गर्न कम्तीमा चार साता लकडाउन गर्न विज्ञले सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले मानवीय क्ष’ति कम गर्न र सं’क्रमणको चक्रलाई रोक्न लकडाउन अहिले सहि समय भएको बताए । सरकारले किटान गरेका १४ वटा प्रभावित ठाउँमा लकडाउन गर्नु जरुरी रहेको उनको भनाई छ । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै शुक्रराज अस्पताल […]
काठमाडौं । कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले सं’क्रमण बढी भएका स्थानहरूका विद्यालय तथा कलेजहरू कम्तीमा ३ सातासम्म बन्द गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा सीसीएमसीका संयोजक ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा सिंहदरवारमा बसेको बैठकले सं’क्रमण बढी भएका स्थानहरुका विद्यालय तथा कलेजहरु कम्तिमा ३ सातासम्म बन्द गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । काठमाडौं, पोखरा लगायतका ठाउँ र […]
आजकल हरेक कोई आफ्नो स्वास्थ्यलाई लिएर दुखी हुन्छन् । तर हामी सबै यति व्यस्त हुन्छौँ कि आफ्नो ठिक तरिकाले ध्यान पनि राख्ने गर्दर्नौ । त्यसैले कतिपय मानसि त्यत्तिकै बिमार हुने गर्दछन् । यदि हाम्रो शरीर स्वस्थ रहने भने हामी कसरी हाम्रो काम पुरा गर्न सक्दछौँ त ? हामीले हाम्रो स्वास्थ्यको खास ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ । […]
काठमाडौँ / कोरोना भाइरस वि’रुद्धको खो’प काठमाडौं आइपुग्ने भएको छ । भारतमा उत्पादित खो’प भोलि बिहीवार काठमाडौं आइपुग्ने भएको हो। भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन तथा बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एक्ट्राजेनेकाले विकास ‘कोभिशिल्ड भ्याक्सिन’ भोलि काठमाडौं आइपुग्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र भारतीय दूतावासले बुधवार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी बताएको हो । कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशत […]
कोरोना भाइरस (को’भिड–१९) को नयाँ प्रकार नेपालमा भित्रिएको पुष्टि भएको छ । पुस पहिलो साता बेलायतबाट आएका तीन जनामा देखिएको सं’क्र’मण नयाँ प्रकारको भएको पाइएको हो । मन्त्रालयका अनुसार केही दिनअघि बेलायतबाट आएकाहरुलाई निगरानीमा राखेको र फर्किएकाहरु मध्ये ६ वटा नमुनामध्ये ३ जनामा पुष्टि भएको हो ।उनीहरको नमुना २७ गते विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा हङकङ […]
काठमाण्डौ । गिजाबाट रगत आउने समस्यालाई मानिसहरुले वेवस्ता गरीरहेका हुन्छन् । तर गिजाबाट रगत बग्नु विभिन्न स्वास्थ्य समस्याको संकेत हुनसक्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । गिजाबाट रगत बग्ने समस्यालाई वेवास्ता गर्दा पछि धेरै ठूलो स्वास्थ्य समस्या निम्तिन सक्छ । त्यसैले गिजाबाट रगत बग्ने समस्यालाई सामान्य सोचेर वेवास्ता गर्नु हुँदैन । गिजाबाट यस कारण रगत निस्कन्छ । पहिलो […]
बिहान–बिहानै खाली पेटमा चिया पिउने बानी धेरैजसोको हुन्छ । तर, खाली पेटमा चिया पिउँनाले एसिडिटी हुनसक्छ । किनकि यसमा भएको टेनिन्स पेटको एसिडलाई बढाई दिन्छ । थाहा पाउनुहोस्, खाली पेटमा चिया पिउँनाले के–कस्ता गम्भिर रोग लाग्छन् । १. प्रोस्टेट क्यान्सर – खाली पेटमा चिया पिउनाले पुरुषलाई प्रोस्टेट अर्थात ग्रन्थीसम्बन्धी रोग लाग्न सक्छ । यो धेरै अध्ययनबाट […]
मस्तिष्कको महत्वपूर्ण भाग बिना नै बाँचिरहेकी यी महिला, जस्ले डक्टरलाई नै चकित बनायो
एजेन्सी । मस्तिष्क हाम्रो शरीरको निकै नै महत्वपुर्ण अंग हो । यो बिना कुनै पनि जीवित प्राणी बाँच्न सक्दैन । बाँच्यो भने पनि त्यो प्राणीमा कुनै दिमाग हुँदैन । किनभने मस्तिष्कले पुरै शरीरलाई नै नियन्त्रण गर्ने गर्छ । त्यसैले जब मष्टिस्क स्वस्थ हुन आवश्यक हुन्छ । तर चीनमा एउटा यस्तो घ’टना भएको छ कि जुन […]
खानेतेलको मुल्य अत्याधिक बढ्यो, बजार अनुगमन झनै सुन्य
January 10, 2021 Ramash kunwar
काठमाडौं। भान्सामा दैनिक नभई नहुने खानेतेलको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । बजारमा तेलको मूल्य अस्वभाविक रूपमा बढेपछि उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् । बजारमा तेलको मूल्यमा मनपरी भइरहेको उपभोक्ताको गुनासो छ । रिफाइन र खानेतेलको मूल्य अत्यधिक बढेको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् । इटहरी–१९ की रविना लिम्बूले अहिले बजारमा खानेतेलको मूल्य छोइनसक्नु भएको बताइन् । ‘केही […]
गुड्दा गुड्दैको बसमा यसरी अस्ताए २६ वर्षीय युवक
January 10, 2021 January 10, 2021 Ramash kunwar
२६ पुस, विराटनगर । झापाको केरखाबाट विराटनगर आउनका लागि बस चढेका युवक मृ-त भेटिएका छन् । आइतबार बिहान केरखाबाट बस चढेका २६ वर्षीय युवक बसभित्रै अस्ताएका हुन् । उनी जनसेवा यातायात प्रालिको मे१ख ३३३३ नम्बरको बसमा चढेका थिए । विराटनगर बसपार्कमा सबै यात्रु ओर्लिएपछि उनी उत्रिएनन् । बसका कर्मचारीले हेर्दा त्यो अवस्थामा भेटिएपछि प्रहरीलाई खबर गरेका […]